MADA JEUNE: Ny sehatr’asa sy ny lalam-piofanana mifandraika aminy. | Canalnews Madagascar
Home A LA UNE MADA JEUNE: Ny sehatr’asa sy ny lalam-piofanana mifandraika aminy.
A LA UNEACTUALITEEDUCATION
MADA JEUNE: Ny sehatr’asa sy ny lalam-piofanana mifandraika aminy.
By Nirinasept 02, 2017, 19:20 0
Hanampy ny mpianatra vao afaka fanadinana bakalorea amin’ny fisafidianana ny lalam-piofanana ho rantoviny ny hetsika fampahafantarana ireo oniversite tsy miankina sy ny lalam-piofanana misy ao amin’izy ireo. Hahazo fanazavana bebe kokoa momba ireo sehatr’asa mifandraika amin’ny lalam-piofanana tsirairay ireo mpitsidika ny « Salon des Etudes Supérieures », karakarain’ny Mada Jeune. Miisa 65 kosa ireo oniversite mandray an-jara amin’ity hetsika ity ao anatin’ny trano heva 100 mahery.
Ny alakamisy 07 sy 08 septambra 2017 ho avy izao, eny amin’ny Lapan’ny Kolotsaina sy ny Fanatanjahantena Mahamasina no hanatanterahana ity andiany faha-14 ity.
Hanome toro-lalana ho an’ireo mpianatra, indrindra fa ireo vao afaka fanadinana bakalorea ireo oniversite tsy miankina miisa enim-polo, mpandray anjara amin’ny hetsika ireo. « Manana roa andro ireo mpitsidika hitady ny lalam-piofanana tiany hanohizany ny fianarana ambaratonga ambony », hoy ny mpikarakara, Lahatra ANDRIAMAHATSANGY ao amin’ny Mada Jeune.
Ankoatra ny firesahana mivantana amin’ireo tompondraikitry ny oniversite, hisy ny boky “guide Mada jeune”, mirakitra ny mombamomba oniversite. Amidy amin’ny sarany 3000 Ariary izany.
Previous PostHARENA AN-KIBON’NY TANY: Miantoka ny fampandrosoana maharitra ny “économie bleue”. Next PostFIANARANA AMBARATONGA AMBONY: Ireo oniversite azo isafidianana.